Headline Archives - Page 2 of 25 - Bandhiga Media
Boqortooyada Sacuudi Carabiya oo hakisay Cumrada iyadoo laga baqayo COVID-19
Hussein Banjaani February 27, 2020
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay inay si ku meel gaadh ah u joojisay gelitaanka shaqsiyaadka hadafkoodu ah inay gutaan waajibaadka Cumrada ama doonaya in ay booqdaan masjidka Nabiga SCW, iyagoo ka walaacsan fiditaanka…
Laba askari oo Turki ah oo lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday gobolka Idlib
Laba ka mid ah askarta ciidmada Turkiga ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerar ay qaadeen ciidamada taliska Asad, kaas oo ka dhacay gobolka ay hadda mashaqadu ka taagan tahay ee Idlib, dhacana waqooyiga-galbeed ee Syria, sida …
Odiyaasha soo xuli lahaa xubnaha Baarlamaanka labaad ee KG oo la xaraynayo
Hussein Banjaani February 26, 2020
Magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta lagu xareynayaa Odoyaasha dhaqanka ee soo xulaya Xildhibaanada Baarlamanaka labaad ee DKGS.
Guddiga Farsamada ee loo xil saaray diyaarinta…
Amaanka Magaalada Garoowe oo aad loo adkeeyey
Wararka ay Bandhiga Media ka halayso magaalada Garoowe ee Caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegaya in ciidamo badan lagu daadiyey magaaladaasi,kuwaas oo howlgallo kala duwan ka sameynaya Xaafadaha Magaaladaas.
Headline Maqal Wararka
DHAGEYSO: Warka Duhurnimo Ee Idaacadda Bandhiga – 26th February 2020
Duhur wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo Idaacadda Bandhiga ee magaalada Muqdisho, 97.5MHz halka Dhuusamareeb aad inaga maqashaan 90.Mhz.
Qodobokale duwan baa idiin kugu heynaa waana maalinnimo Arbaco ah…
DFS oo dalalka dariska ah ugu baaqday in ay joojiyaan faragalinta ay kuhayaan dalka
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday Waddamada Caalamka gaar ahaanna kuwa deriska la ah dalka in ay ka daayaan faragelinta arrimaha gudah Soomaaliya.
Danjiraha Soomaaliya ee Qaramada Midoobey Abuukar Cismaan Baalle�…
Tobaneeyo ruux oo ku dhaawacantay dibadbaxyada India
Waxaa sare u sii kacay khasaaraha ka dhashay mudaaharaadkii dhawaan ka dhacay magaalada New Delhi ee dalka India iyadoo ilaa oiyo hadda la xaqiijiyay dhimashada ugu yaraan 19 qof.
Dr Rajesh Kalra oo ah madaxa isbitaalka Guru Teg Bahadur…
Ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Somaliland oo ku dagaalamaya Sanaag
Wararka Bandhiga Media saaka ay ka helayso deegaanka Hadaaftimo ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in laga maqlayo dhawaqa rasaasta ay is weedaarsanayaan ciidamo ka kala tirsan Puntland iyo Somaliland.
Ilo deegaanka ah ayaa inoo sheegey…
Maxkamadda gobalka Nugaal oo markii seddexaad dhagaysanaysa kiis la xiriira kufsi iyo dil
Magaalada Garoowe waxaa maanta ka markale ka furmaya dhageysiga labaad ee ragga loo heysto in ay kufsi iyo dil Magaalada Garoowe u geysteen Hodan Axmed Shanleyste oo ahayd Haweeney Xaamilo ah.
Dhageysiga Dacwadda Ragga gaaraya 7-ruux…
Jubbaland oo cabasho kadhan ah dowladda u gudbisay beesha caalamka
Maamulka jubbaland ayaa soo saaray war lagu faah faahiyay xaaladda Gobolka Gedo halkaas oo ay ku wada sugayihiin Ciidamo kala taabacsan dowladda Federaalka ah iyo Maamulka Jubaland.
Warkaan ayaa lagu sheegay in Jubaland gaar ahaanna…
Suuqyada Boosaaso oo maanta ah kuwa xiran
Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa saaka waxaa gabi ahaanba xiran suuqayada magaaladaas iyada oo Ganacsatada ka careysanyihiin canshuur kordhin ay sameysay Puntland.
Ganacsatada ayaa sheegaya in Maamulka Puntland…
Beesha Caalamka oo codsatay in doorashada Soomaaliya lagu qabto waqtigii loogu talagalay
Dowladaha, iyo ururada caalamiga ah ee daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa war ay si wada-jir ah Talaadadi shalay u soo saareen ugu baaqay dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya in ay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan, sidii Soomaaliya…